Iindaba -Imichiza ekrwada iseta umjikelo omtsha wokunyuka kwamaxabiso!
Izixhobo zekhemikhali eziluhlaza zibeka umjikelo omtsha wokunyuka kwamaxabiso!
Izinto zeMichiza eziSebenzayo ziCwangcisa umjikelo omtsha wexabiso lokunyuka kwamaxabiso!
Izinto ezininzi zokucoca zivaliwe! Ioyile ekrwada yenyuka kwaye yabetha phezulu ngokutsha phantse kwiinyanga ezili-13!
Njengokuba imozulu ebandayo inwenwela emazantsi eTexas, iTexas iyonke inokuphumeza ukuphela kwamandla okuphungula imfuno yamandla kunye nokuphepha ukusisigxina "kombane oyintlekele". Ukucinywa kwamandla amakhulu kunye nokulahlwa kwemithi kukhokelele ekuvalweni okukhulu kwemveliso yeoyile kunye nendawo yokucoca.
IMotiva Enterprises, esona sixhobo sokucoca ioyile sikhulu eMntla Merika, ithe izakuvala indawo yayo yokucoca ioyile ePort Arthur eTexas ngenxa yemozulu ebandayo.
I-DRM Phillips Chemical Company inike ingxelo yokuba ngenxa yemozulu ebandayo kwisityalo sePasadena eTexas, inkampani iyakulungiselela ukuvala izixhobo.
U-Onkyo wathi umbhobho weoyile ekrwada kumgca we-59 wavalwa emva kokuphuma kombane.
I-Saudi Aramco's Motiva Enterprises LLC nayo iya kuyeka ukusebenza kokucoca ioyile ePort Arthur, eTexas.
Ukucocwa kweMarathon yeQumrhu leGalveston Bay emazantsi eHouston nako kwavalwa okwethutyana ngenxa yemicimbi yemozulu.
Ngokwengxelo ye-Standard & Poor's Global Platts kamva ngolwe-Lwesibini, ukucinywa kombane kubangele iindawo ezininzi zokucoca eTexas ukuvala okanye ukunciphisa ukusebenza. Ubuncinci i-2.6 yezigidi zemigqomo zaqinisekiswa ukuba zivaliwe ngokupheleleyo, kwaye zizonke malunga nezigidi ezi-5.9 zemigqomo yenqanaba lokucoca. Kwangelo xesha, ingxelo ithi amaqondo obushushu abandayo anciphise ioyile ekrwada yase-US kunye nemveliso yegesi yendalo.
Ngenxa yokubanda kakhulu emazantsi, izigidi zemiphanda yokucoca ioyile zanqunyanyiswa, kwaye amaxabiso ekamva leoyile ekrwada aqhubeka nokunyuka. I-oyile eluhlaza yadlula kwi-60 yeedola, ukuvuselelwa kwelona nqanaba liphezulu ukusukela nge-8 kaJanuwari kunyaka ophelileyo.
Izigebenga ngokudibeneyo zilibazisile ukuhanjiswa! Ukufikelela kwiintsuku ezili-180!
Ukusukela kwindyikityha yeNovel Coronavirus, iingxilimbela zamachiza aphesheya kwezilwandle bezikwingxaki phakathi kwemveliso kunye nentengiso. Izinto ezisetyenziswayo zinqongophele kwaye uthutho luthintelwe, okwenza iinkampani zamachiza aphesheya kwezilwandle kufuneka zinciphise iindleko zokuvelisa. Njengoko ifuthe liqhubeka, ukunqongophala okukhulu kwimarike yemichiza kuye kwanda. Ngokwengxelo yentengiso,Iinkampani ezininzi zamachiza ezikhokelayo zibhengeze amandla amakhulu kunye nokulibaziseka ukuhanjiswa!
Iimarike ziphumile kwisitokhwe, kwaye uninzi lwazo
abavelisi bathumela amaxabiso anyusa ileta kwakhona!
Abavelisi abakhankanyiweyo abongeza ixesha lokuhanjiswa ziinkokheli zeshishini. Ukunqongophala okukhulu kweempahla kwintengiso kungaphaya kokucinga komntu wonke. Ngaphantsi kwempembelelo yokunqongophala okwahlukeneyo kunye nokuphuma konikezelo, iikowuti zeemarike zezinto ezisetyenziswayo zekhemikhali azisebenzi ngomzuzwana omnye, kwaye iikowuteshini zombuzo ngamnye zikhuphuke kakhulu, kwaye amaxabiso anyusa amaxabiso avela kubavelisi abakhulu athunyelwe kwakhona!
Ulibaziseko lokuhanjiswa kwehlabathi, ixhala lokunyusa intengiso yemichiza!
Ukuveliswa kweenkampani zamachiza ezikhokelayo kuye kwacotha kwaye ukulibaziseka ekuhanjisweni kweenkonzo kuye kwayandisa inkxalabo yentengiso malunga nokunqongophala, kwaye imarike yemichiza iqhubekile nokunyuka. Ngokwe-Guanghua Trading Monitoring, bekukho iintlobo ezingama-41 zeekhemikhali ezinkulu eziphakame kwiveki ephelileyo (2.15-2.19), kwaye zintandathu kuphela iintlobo zeekhemikhali ezininzi eziweleyo. Phakathi kwabo, iinzuzo ezintathu eziphezulu zazikho i-styrene (21.53%), isooctyl alcohol (18.48%), kunye ne-hydrogenated benzene (15.81%).
Ukujonga imeko yangoku yemakethi, iifektri zangaphandle zivaliwe ngakumbi kwaye imeko yokuxinana kunzima ukuyiphelisa. Ioyile ekrwada yamanye amazwe iyaqhubeka nokunyuka. Kulindelwe ukubaimarike yemichiza iya kuqhubeka nokunyuka kwikota yokuqala.